किन चिलाउँछ कान? यस्ता छन् कारण - Everest Dainik - News from Nepal
किन चिलाउँछ कान? यस्ता छन् कारण
काठमाडौं । प्रथमतः कानमा फोहर जम्मा भएमा चिलाउने समस्या हुन्छ । कानमा गहिरो भाग हुने भएकोले टाउको र बाहिरी भागबाट आएका फोहर पनि कानमा सजिलै जम्मा हुन्छ । धेरै फोहोर जम्मा भएपछि यसले चिलाउने समस्या निम्त्याउँछ । कान चिलाउँने दोस्रो कारण भनेको अटोमाइकोसिसको समस्या हो ।
यसलाई कानको फङ्गल इन्फेक्सनबाट चिलाउने समस्या पनि भनिन्छ । यो बिभिन्न किसिमको हुन्छ। फङ्गल इन्फेक्सन भएको समयमा कानमा पानी, तेल पर्यो भने कान पाक्ने समस्या पनि हुन्छ । मनोवैज्ञानिक कारणले पनि कहिले काँहि कान चिलाउने हुन्छ । नाक, घाँटीको एलर्जीले गर्दा पनि कान चिलाउन सक्छ ।
कानमा के समस्या छ, त्यसको उपचार गर्नु नै यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय हो । मनोवैज्ञानिक रुपमा हो भने, त्यसको उपचार गर्ने, फोहोर जमेको भए सफा गर्ने र फंगलको कारण हो भने, फंगलको उपचार गर्न पर्छ ।
कतिपय अवस्थामा कान चिलाउँदा कानको बाहिरी भाग वा जालीमा प्वाल पर्ने, घाउँ हुने समस्या देखापर्न सक्छ । फंगल्सलाई पानी वा तेलबाट बचाउँन सकिएन भने, त्यसले बढ्ने मौका पाउँछ र आगामी दिनमा इन्फेक्सन बढ्दै गई जालीमा प्वाल पार्छ। -डा. यज्ञबहादुर भण्डारी, नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ, स्वास्थ्य खबरबाट